Soomaalidii hore Ragga Shan Nooc Bay u Qaybin Jireen - WardheerNews
Soomaalidii hore Ragga Shan Nooc Bay u Qaybin Jireen
Afeef: Qoraalkani Qabiil gaar ah ka hadli maayo, laakiin si guud buu wuxuu u eegayaa Soomaalidii hore siday ragga u qiimayn jireen, inta nooc ay u qaybin jireen iyo ku cabirka dalka.
Garaadku waa shay ilaah uunka qofba in ka siiyoo oo galiyo, laakiin dadka qaarki waxaad mooddaa inaysan ab iyo isir u lahayn oo yihiin dad garaad iyo garasho xun, dhaqan xun, deris xun, xurmo xun, ama xidid xun.
Haddii aad u fiirsato xaaladdihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo martay iyo raggii talada so qabtay tan iyo bur-burkii dawladdii dhexe, waxaad arkaysaa in xukunka dalka ay isu bed-beddalayeen rag sina aan u mudnayn inay wax hoggaamiyaan sabahan awgood: waddaniyad xumo, aqoon xumo, waaya aragnimo la’aan, aqoon dawladnimo la’aan, shisheeye u adeeg, danayste, bililiqo iyo boob hanti guud, diin nacayb, iwm.
Anigoo la yaaban dadnimo xumada dadka talada waddanka isku haysta baan maalin waxaan dhagaystay abwaan Somaaliyeed ah oo ka hadlaya inta nooc ee berigii hore ragga loo qaybin jiray. Wuxuu yiri ragga waxaa loo qaybin jiray 5 nooc:
Sidaas oo ay tahayna marar badan oo ay soo martay fursad ay ku hanan kareen hoggaaminta waddanka ay ku fashilmeen inay si wanaagsan wax u maamulaan. Iska daa inay wanaag sameeyaane, waxay sii wadeen bililiqadii iyo colaad hurintii bulshada dhexdeeda. Balaayo waa in taladu gacanta u gasho dad aan talin karin oo dawladnimo iyo maamul waxba ka garanayn, isla markaana aan oggolayn in loo taliyo, si loo samatabixiyo dadka iyo dalka. Dad xunka noocaan ah oo xaaraanta, xaqdarrada iyo bililiqada ku taajiray, dhallinyardii waddankana baday tahriib ay in badan ku dhinteen, aas iyo asturna helin, ayaa waddankii laga maamuli la’ yahay.
Kii talin jiray iyo kii laga tashan jiray baa maanta taladii waddanka isku haysta. Mararka qaarkoodna kii laga tashan jiray baa taliya. Hoggaan xumada noocaas ah meel cidla bay Soomaaliya dhigta. Nimaan talada goyn jirin markii talada loo dhiibo, mid xilkiisii mas’uul gabayna guurti iyo xildhibaan loogu yeero, gegi cidla ah inaanu naal sow garteen ma aha.
Hoggaan xumaadii waxay-na dhaxalsiisay inaan daba dhilif u noqono dowladdo shisheeye, iyo in reer walba kii ugu dhiigya cabsanaa oo bur-burka dalka kaalinta ugu wayn ka qaatay uu talada reerka gacanta ku qabto, ka dibna loogu yeero halgamaa, mujaahid, iyo geesi.
Gabay uu Nageeye Khaliif Cali tiriyay baa waxaa ka mid ahaa:
Ugu dambayn, bal inaynu talo xunnahay, sidee u dhici kartaa in ay Soomaaliya iska diiwaan galiyaan in ku dhow 80 xisbi siyaasadeed. Dunida hormartay waxa ka jira 2 ama 3 xisibi oo mabda’a’ ku kala duwan laakiin aan ku kala duwanayn danaha danta u ah dalkooda iyo dadkooda.
Dunida horumartay waxay doortaan qofkay u arkayaan inuu ka shaqaynayo danaha degaankooda. Tusaale ahaan, Ilhaan Cumar waa gabar asalkeedu yahay Soomaali laakiin Baarlamaanka Maraykanka ku matasha dad aysan wadaagin isir, diir iyo diin toona. Dadaalka ay ku bixiso ka shaqaynta danaha degaankeeda ayaa lagu doortay.
Soomaaliduna ma gaari doonto horumar la taaban karo ilaa ay ka gudubto Xisbiyada qabiilka ku dhisan iyo magaalooyinka halka qabiil deggan yahay. Waa in Dhuusamareeb lag adooran karo oo uu ka talin karo qof Baydhaba ka soo jeeda.